चार्ल्स शोभराजसँग किन टाढिइन् निहिता विश्वास ?
चार्ल्स शोभराजसँग किन टाढिइन् निहिता विश्वास ? एक वर्षदेखि छैन सम्पर्क
कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, ३१ वैशाख
विकिनी किलरका रुपमा चिनिएका कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराज गुरुमुखलाई उनकी प्रेमिका निहिता विश्वासले भेट्न छाडेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका शोभराजलाई निहिताले भेट्न छाडेको एक वर्ष भइसकेको सुन्धारा कारागार प्रमुख जेलर सहसचिव वेधनिधि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार शोभराजले समेत निहितालाई जोलबाट फोन सम्पर्क गरेका छैनन् ।
‘म सुन्धारा कारागारको जेलर भएर आएको करिब एक वर्ष पूरा हुँदै छ, त्यो बेलादेखि निहिता एकचोटि पनि भेट्न आइन् भनेर सुनेको छैन, देखेको पनि छैन,’ अधिकारीले भने ।
कारागार स्रोतका अनुसार शोभराजको मुटुको अपरेसनपछि निहिताले उनलाई भेट्न छाडेकी हुन् । २९ जेठ २०७४ मा शोभराजको गंगालाल अस्पतालमा ओपन हार्ट सर्जरी भएको थियो । शल्यक्रियाका लागि भने निहिताले नै रगत दिएकी थिइन् ।
कारागार स्रोतका अनुसार शोभराजले अपरेशन अघिनै जेलमै निहितालाई सिन्दुर हालेका थिए । निहिता काठमाडौंकी स्थानीयवासी हुन् । कुख्यात अपराधीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण उनी चर्चामा थिइन् ।
अधिवक्ता शकुन्तला थापा (निहिताकी आमा) भने समय समयमा शोभराजलाई भेट्न कारागार पुग्ने गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले शोभराजलाई अमेरिकी पर्यटक कोनी जो ब्रोन्जिचको सन् १९७५ मा हत्या गरेको आरोपमा जन्मकैदसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । उनीमाथि विभिन्न देशमा गरी २० जना बढी हत्याको अभियोग छ ।
शोभराज १५ वर्षअघिदेखि केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । २०६० सालमा उनी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।
स्वास्थ्य समस्यापछि टाढिइन्
कारागारका अनुसार शोभराजको मुटुको अपरेसन गर्नु पहिला निहिता हप्ताको दुई दिन शोभराजलाई भेट्न सुन्धारा कारागार पुग्ने गर्थिन् । उनीहरुको भेटघाटमा माया प्रेमका कुरा हुने गरेको कारागार स्रोतको भनाइ छ ।
‘अंग्रेजी बोल्नमा पोख्त निहितासँग भेट हुँदा शोभराजको अनुहारमा समेत चमक देखिने गरेको थियो । ‘अहिले के कारणले भेट्न आउँदिनन्, त्यो त थाहा भएन । हामीसँग पनि शोभराजले उनीबारे कुरा गर्दैनन् । निहिताकी आमालाई भने फोन गरिहन्छन्,’ कारागार स्रोतले भन्यो ।
शोभराजले समेत कारागारबाट निहितालाई फोन गर्न छाडेको स्रोतको भनाइ छ । शोभराजको स्वास्थ्य अवस्था देखेर उनी टाढिएको कारागार स्रोतको अनुमान छ ।
अन्तिम इच्छा छोरी भेट्ने
शोभराजले अन्तिम इच्छा छोरी भेट्न रहेको बताउँदै आएका छन् । समय समयका कारागारका नाइेकेसँग भेट हुँदा उनले आफू जेलमुक्त भएपछि घर फर्किने समेत सुनाउने गरेको एक नाइकेले बताए ।
कारागारका नाइकेलाई उनले आफूले जापानी नागरिकसँग बिहे गरेको र उनीबाट एक छोरी जन्मिएको बताएका छन् । आफू नेपाल आउँदा छोरीको उमेर ६ महिना मात्र पुगेको शोभराजले बताएका छन् । नाइकेका अनुसार शोभराज निहिता र शकुन्तलालाई फ्रान्स लैजान चाहन्छन् ।
उपचार खर्च १५ लाख बढी
शोभराजको उपचारमा सरकारले हालसम्म १५ लाख बढी खर्च गरेको कारागारले जनाएको छ । उनले बन्दी जीवन बिताएको १५ वर्षको अवधिमा सरकारले १५ लाख खर्च गरेको हो ।
यसको अलवा शोभराजले आफैंले समेत विभिन्न निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराएको जेलर अधिकारीले बताए । शोभराजमा दमको समस्या पहिलेबाटै रहेको अधिकारीको भनाइ छ । निजी अस्पतालको उपचार खर्च भने शोभराज आफैंले तिर्दै आएका छन् ।
होलान् त जेलमुक्त ?
शोभराज कैद छुटको माग गर्दै १९ कात्तिक २०७५ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । शोभराजको वारेसमा निहिताकी आमा अधिवक्ता शकुन्तला थापा छन् ।
कारागार नियमावलीको प्रावधानमा विदेशी नागरिकले पनि बिना भेदभाव पाउनुपर्ने मागसहित शोभराज सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
कुनै पनि अपराधका कसुरदार भए पनि ७० वर्ष उमेर कटेपछि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कारागार नियमावलीमा व्यवस्था छ । आफूलाई समेत त्यही व्यवस्था लागू हुनुपर्ने उनको माग छ ।
कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ को उपनियम २ (क) अनुसार ७० वर्ष उमेर कटेका र असल चाल चलन भएका कैदीलाई कारागारको सिफारिसमा ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । शोभराजले आफू ७४ वर्ष नाघेको बताएका छन् ।
शोभराज सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ असोज २०६० देखि कैदमा छन् । उनले २०८० असोजसम्म जन्मकैदमा बस्नुपर्नेछ । तर, सर्वोच्चले कैद मिनाहा गरेमा उनी तत्कालै जेलमुक्त हुनेछन् । हाल उनको कैद छुटसम्बन्धी निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६, ०५:०२:००